‘सरकारले दशैंका बेला सुकुम्बासीका लागि दशा निम्त्यायो’
काठमाडौँ, २५ असोज। नेकपा(एमाले)ले रुपन्देहीको मोतिपुरमा सुकुम्बासीको हत्या गरेको भन्दै राष्ट्रियसभामा आपत्ति जनाएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले नागरिकको हत्या गरेर सरकारले दशैंका बेला सुकुम्बासीका लागि दशा तिम्त्याएको आरोप लगाए । भट्टराईले भने ‘चारजना सुकुम्बासीको हत्या गर्ने काम भयो अरुका लागि दसैँ आएको छ तर सुकुम्बासीका लागि दशा बनेर आयो । म घटनाको […]
आज रमा एकादशी, यस्तो छ पौराणिक कथा
हिन्दु धर्ममा एकादशी व्रत महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । प्रत्येक वर्ष चौबीस एकादशी र अधिकमास वा मलमास परेमा २६ एकादशी हुन जान्छ । कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्षमा पर्ने एकादशीको नाम रमा एकादशी हो । रमा एकादशीको कथा अनुसार प्राचीन कालमा मुचुकुन्द नाम गरेका एक राजा थिए । देवराज इन्द्रसहित यम, कुबेर, वरुण र बिभीषणसँग उनको गहिरो मित्रता […]
दशैं कस्तो भो?
दशैं सकिएसँगै नियमित रुपमा कार्यालय खुल्यो। १०/१२ दिनका लागि टाढा भएका साथी र सहपाठीहरुसँग भेट्ने बित्तिक्कै प्रश्न ओइरियो, ‘कस्तो भो दशैं?’...
दशैंं बाल्यकालमै रमाइलो । दशैं मात्र कहाँ हो र, सबै चाडबाडहरू बाल्यकालमै रमाइला । बाल्यकालमा दशैं रमाइलो हुनुका धेरै करण थिए । सधैँभरि काममा खट्नुपर्ने आमा दशैंमा हामीलाई वरिपरि राखेर मीठामीठा खाना बनाउनुहुन्थ्यो । सधैँभरि बाहिर जाने अनि डुल्ने बुवा फूलपातिदेखि घरमै बस्नुहुन्थ्यो । भाउजूहरू आँपका हाँगामा बाबियोले पोयो बुनेको पिङ्ग हालिदिनुहुन्थ्यो । गाउँभरिका साथीहरू पिङ्गमा झुमिन्थे । हामीहरू पालो पर्खेर पिङ्गमा मच्चिन्थ्यौं । स्कूल जान नपर्ने भएपछि दशैंंमा अर्को रमाइलो थपिन्थ्यो । स्कूल बिदा भएपछि गु...
दशैंमा ‘थेरापी’का गहना
२८ असोज, काठमाडौं । ‘दशैं अधिकांश नेपालीको लागि विशेष चाड हो । दशैंमा नयाँ कपडासँगै गहना लगाइन्छ । त्यसैले हाम्रो व्यापारको लागि पनि दशैं विशेष हो ।’ सुनको जलप लगाएका गरगहना व्यवसाय गरिरहेकी लुमन्ती शाक्यले आफ्नो व्यवसायका लागि पनि दशैं विशेष भएको बताउँछिन् । ललितपुर पाटनमा ‘थेरापी’ स्टुडियो मार्फत् उनले सुनका जलप भएका झुम्का, मुन्द्री, […]
दशैँमा मासु खाने सही तरिका
काठमाडौँ– दशैँ भन्ने बित्तिकै मान्यजनको हातको टीका र आशिर्वाद पछि राम्रो खाने र राम्रो लाउने चाडको रुपमा मानिन्छ । दशैँको खानपानको विशेष महत्व छ । माछामासु खानेहरुकालागि मासु विनाको दशैँ खल्लो हुनसक्छ । दशैँमा खाने मासुमा खसीको मासु त्यसमा पनि पक्कु लोकप्रिय छ । त्यसबाहेक कुखुरा, रागा, बोका, च्याङ्ग्रा, हास, माछा लगायत थरीथरीका मासु खाने […]
दशैँको इतिहास - पहिले तीन/तीन महिनामा दशैँ मनाइन्थ्यो
परापूर्व कालदेखि नै दशैँ शरद ऋतुमा मनाउने चलन रहिआएको छ । प्राचीन कालमा शासकहरुले दशैँको दिन दुर्गाको आराधना र पूजापाठ गरेर आफ्नाे विजयी यात्रा प्रारम्भ गर्ने गरेको उल्लेख गरिएको पाइन्छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा रहेर कुरा गर्दा लिच्छवीकालदेखि नै दशैँ मनाइने गरेको अभिलेखहरुमा पाउन सकिन्छ । आज भन्दा साढे छ सय वर्ष अगाडि पृथ्वीराज मल्लको पालामा लेखिएको गोपालराज वंशावलीमा दशैँ मनाइने गरेको उल्लेख गरिएको छ । यो कुरा हामीले दाबी गरेर भन्न सकिने कुरा हो।हामीले असोजमा बडा दशैँ मनाउँछौँ र चैतमा चैते दशैँ । तर प्राचीनकालम...
दशैंमा मासु कसरी खाने, कति खाने?
काठमाडौं : मासु खान दशैं कुर्नै नपर्ने भए पनि दशैंलाई टन्‍न मासु खाने पर्वको रूपमा लिइन्छ। अहिले पनि दशैं भन्नेबित्तिकै घरमा खसी काट्नैपर्ने, मासु खानैपर्ने मान्यता छ। तर, दशैंमा खानपानमा ध्यान नदिँदा हामीलाई जटिल प्रकारका स्वास्थ्य समस्या देखा पर्ने गर्छन्। जसले गर्दा दशैंमा रातो टीका र जमराका साथै खानपानका (मासुका परिकार) लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।मासुका परिकार धेरै खाने प्रचलन रहेको दशैंमा कस्ता मानिसले कति मासु खाने भन्ने कुरा हेक्का नराख्दा खानपान (मासुका परिकार)ले स्वास्थ्यमा
राउटे संस्कृति अनुसार दशैंका लागि औशी अघिनै छाप्रोमा खशी भित्र्याइसक्नु पर्छ। तीन महिनादेखि भत्ता नपाउँदा अपवादबाहेक धेरैका छाप्रामा खशी छैनन्। केहीले उधारोमा खशी ल्याएका छन्। भत्ता नपाउँदा राउटे बस्तीमा दशैंको रौनक छैन।...
दशै लक्षित सानिमा बैंकले ल्यायो दशैं बम्पर योजना
काठमाडौं, ४ असोज । महान पर्व बडा दशैंको अवसरमा सानिमा बैंकले ग्राहकहरुको लागि विशेष दशैं बम्पर योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले नेपालीहरुको ठुलो चाड दशैलाई लक्षित गरी बैंकले आश्विन १ गतेदेखि लागू हुने सो योजना अन्तर्गत व्यक्तिगत मुद्दती खातामा ९ दशमलव ५१ प्रतिशतसम्म उच्च ब्याजदर मासिक रुपमा प्रदान गर्ने भएको छ । बैंकको खाता […]
चैते दशैं : चार दशैंमध्ये कति छ यसको महत्व ?
आज चैत्र शुक्ल अष्टमी अर्थात् चैते दशैं । वसन्तीय नवरात्रको आठौं दिन धुमधामका साथ देशभर चैतेदशैं मनाइँदैछ । यो शारदीय नवरात्रपछिको सबैभन्दा ठूलो दशैं हो । संस्कृतिविद् विनोदराज शर्माका अनुसार एक वर्षमा मनाइने ४ किसिमको दशैं आफैँमा ठूलो र छुट्टै महत्वको हुन्छ । तर पनि समाजमा हुने आस्थाका आधारमा यसलाई शारदीय नवरात्र पछिको दशैंको रूपमा […]